I-china Powder yokunyibilikisa isinyithi abavelisi kunye nabathengisi | Xuanyi
Olona ncedo luphambili lokunyibilikisa isinyithi kukuba yenziwe ngezinto zomgubo zenziwe sintered, ke ibhafu yeoyile ukusukela ekubeni i-lubricity intle kakhulu, imilo yezinyo kwaye bonke ubukhulu bunokwenziwa, ngokubanzi ayisiyiyo enye inkqubo; izixhobo, amandla akwanelanga, awunakudlulisa i-torque enkulu, ukuchaneka kwezinyo ngokubanzi kwinqanaba le-6 ~ 9, ukuchaneka komlinganiso ngokubanzi kwinqanaba le-IT7 ~ 6.
Isinyithi sesinyithi yitekhnoloji entsha yokuvelisa, enezinto zayo eziluncedo, ngakumbi ezifanelekileyo kwimveliso yobuninzi. Kodwa ayenzelwa yonke imeko.Ukulungiswa kwepowder yensimbi kufuna ukwenziwa kokufa okuhambelanayo, kusetyenziswa isinyithi esine-powdery ngokusebenzisa isintering kunye nenkqubo ehambelana nokwenza iinxalenye. Amandla ayahluka ngokwento esetyenzisiweyo.
1. Uninzi lwezinyithi ezinqabileyo kunye nezinto zazo, ii-alloys ezingezizo, izinto ezinokungena zinokuveliswa kuphela ngumgubo wokunyibilikisa isinyithi.
2. ngenxa yokuba indlela yokunyibilikisa umgubo ingacinezelwa kubungakanani bokugqibela bokuxinana, ngaphandle okanye kancinci kwesidingo sokulungiswa koomatshini, inokusindisa kakhulu isinyithi, inciphise iindleko zemveliso. Ukulahleka kwesinyithi ekwenziweni kwemveliso sisinyithi somgubo Le ndlela yi-1-5% kuphela, ngelixa ilahleko yesinyithi ekwenziweni kweemveliso ngendlela eqhelekileyo yokuphosa inokuba phezulu njenge-80%.
3. kuba inkqubo yokunyibilikisa umgubo kwinkqubo yokuvelisa ayinyibilikisi, ayikoyiki ukuxubana nobumdaka obuziswe yi-crucible kunye ne-deoxidizer, kwaye ukuntywila kuqhutywa kwindawo yokuphumla kunye nokunciphisa umoya, ungoyiki i-oxidation , Kwaye ayiyi kunika naluphi na ungcoliseko kwizinto eziphathekayo, kunokwenzeka ukuba wenze izinto zokucoceka okuphezulu.
4. indlela yokunyibilikisa isinyithi somgubo inokuqinisekisa ukuchaneka nokufana komlinganiselo wobume bezinto.
5. umgubo wokunyibilikisa isinyithi ulungele ukuveliswa kobume obufanayo kunye nenani elikhulu leemveliso, ngakumbi izixhobo kunye nezinye iindleko zokulungiswa okuphezulu kweemveliso, ngokuvelisa umgubo wentsimbi kungayinciphisa kakhulu imveliso cos.
Ukulawulwa kobunzima beemveliso zesinyithi ngokubanzi ngexesha lonyango lobushushu:
Okulandelayo: Umatshini weeLaphu Ukuthunga Umatshini Womatshini Wokuhombisa iimpahla